Ukuzinza-iBXL yokuPakisha ngokuYilayo
Ukupakishwa okuzinzileyo namhlanje nangomso
Ngokwe-IBM yophando lokuqonda, uzinzo lufikelele kwinqanaba lokuncipha. Njengabathengi besanda ngokwamkela izizathu zentlalo, bafuna iimveliso kunye neempawu ezihambelana namaxabiso abo. Phantse aba-6 kwabali-10 abathengi abavavanyiweyo bakulungele ukutshintsha imikhwa yabo yokuthenga ukunciphisa ifuthe kwindalo esingqongileyo. Phantse abasibhozo kwabali-10 abaphendulayo babonisa ukuba uzinzo lubalulekile kubo.
Kulabo bathi kubaluleke kakhulu / kubaluleke kakhulu, ngaphezulu kwe-70% baya kuhlawula ipremiyamu ye-35%, ngokomndilili, kwiimpawu ezizinzileyo nezinoxanduva lokusingqongileyo.
Ukuzinza kubalulekile kwihlabathi lonke. I-BXL Creative ithatha uxanduva lwayo lokubonelela abathengi bamanye amazwe ngezisombululo zokupakisha ezi-eco kwaye inegalelo kuzinzo lwehlabathi.
Xa ubuchule buhlanganiswe nesisombululo sephakheji ye-eco. I-BXL Creative iphumelele ibhaso laBalaseleyo loBoniso kukhuphiswano lweMobius kunye noyilo lwephakeji likaHuanghelou.
Kule nto yokudala iphakheji, i-BXL isebenzisa iphepha le-eco kunye nephepha lebhodi ukwenza isakhiwo sebhokisi eshukumisayo, kwaye siyidibanise noyilo lwegraphic ukulingisa inkangeleko yokwakha yaseHuanghelou. Uyilo lonke lwephakeji luhambisa ukhathalelo lwe-BXL Creative kunye noxanduva kwezentlalo, ngelixa kwangaxeshanye, ihambisa ubuhle bobugcisa.
Ukupakishwa kwempuphu ebunjiweyo, ekwabizwa ngokuba yifayibha ebunjiweyo, inokusetyenziselwa itreyi yefayibha okanye izikhongozeli zefayibha, esisisombululo se-eco, kuba senziwe ngezinto ezahlukeneyo ezinemicu, ezinje ngephepha elenziwa ngokutsha, ikhadibhodi okanye enye imicu yendalo (njengommoba, uqalo , ingqolowa yengca), kwaye inokuphinda isetyenziswe kwakhona emva komjikelo wobomi bayo obuluncedo.
Ukubaluleka okukhulayo kozinzo lwehlabathi kuncede ukwenza ukupakishwa kwempuphu isisombululo esinomtsalane, njengoko inokuboliswa ziintsholongwane ngaphandle kokulahlwa komhlaba okanye ukulungiswa kwento ehlaziyiweyo.
Ukuhlala ngokuvisisana nendalo
Olu luyilo lwephakeji lukwasekwe kumxholo we-eco. Yenzelwe uphawu lwerayisi oludumileyo lwe China i-Wuchang Rice.
Iphakheji yonke isebenzisa iphepha le-eco ukusonga iityhubhu zerayisi kunye nokuprinta ngemifanekiso yezilwanyana zasendle ukuhambisa umyalezo wokuba uphawu lukhathalele ubomi basendle kunye nendalo. Ingxowa yephakheji yangaphandle ikwasekwe kwinkxalabo ye-eco, eyenziwe ngomqhaphu kwaye iphinde isebenze njengengxowa ye-bento.
Omnye umzekelo ogqibeleleyo wokubonisa into ehanjiswa yipasile, xa ubuchule buhlanganiswe nesisombululo sephakheji ye-eco.
I-BXL yenza uyilo lwephakeji isebenzisa izixhobo zephepha le-eco ngokupheleleyo, ukusuka kwibhokisi yangaphandle ukuya kwitreyi yangaphakathi. Itreyi igcwele ingqokelela yamaphepha ebhodi, ibonelela ngokhuseleko olupheleleyo kwibhotile yewayini ngalo lonke ixesha lokuhamba nzima.
Kwaye ibhokisi engaphandle iprintwe ngo "I-Antelope yaseTibet enyamalalayo" ukuhambisa umyalezo eluntwini ukuba izilwanyana zasendle ziyanyamalala. Kufuneka sithathe amanyathelo ngoku kwaye senze izinto ezilungileyo kwindalo.